I-60W yeLed Strip yokuKhanyisa ukuKhanya kombane PF
Isiphumo sangoku: 2.5A / 5A
Ukusebenza okuqhelekileyo: 89% ；
Ubukhulu: 179 * 41 * 31mm / 182 * 56 * 30mm
Into No: VA-12060D091, VA-24060D091
PF≥0.5 / 230Vac (umthwalo opheleleyo)
PF≥0.9 / 230V (umthwalo opheleleyo)
I-CE, iRohs, iBIS
I-CE, iRohs, i-BIS, i-EMC, i-SAA
179 * 41 * 31mm (L * W * H)
182 * 56 * 30mm (L * W * H)
Ubungakanani obukhulu, ukusebenza ngokukuko okuphezulu, ukuthembeka okuphezulu, ixesha elide lokuphila ； .Ireyithi ye-67
Ukukhuselwa: Ngokweqile 、 Ngaphezulu kwamandla ombane
Iimpawu kunye neeleta zoMva zoLwazi, iileta ezizimeleyo zesitishi, iibhokisi zokuKhanya kunye noRhola
Ukufakwa phantsi kweKhabinethi, iRV / Izibane zeMoto, ukuKhanyisa ngeAccent, okanye nayiphi na iProjekthi yeVoltage ePhantsi
1, Umzi-mveliso wokuqala ungene kuMbane waManzi oManzi e-China kwilizwekazi;
Iminyaka engama-2,10 igxile kuPhando lwe-LED lokubonelela ngombane kunye nophuhliso, ukuvelisa;
I-3, i-Serviced abathengi abangama-2,500, kubandakanya i-2000 kwilizwekazi lase-China, i-500 kwiimarike zaphesheya kwihlabathi liphela;
4, Ukuthembeka okuphezulu kunye nozinzo olulungileyo, kwiindidi ezininzi zeprojekthi enkulu yokukhanyisa ngaphandle, ngokusebenzisa uvavanyo kubathengi abangama-2500;
I-5, i-LED Power Supply yintliziyo yezibane ze-LED kunye neenguqu zecandelo eliphambili le-LED Power Supply. Ukulawula umgangatho, senze isiguquli ngomzi-mveliso wethu, oku kubonelelo lwamandla luzinzile kwaye luthembekile;
6, isiqinisekiso esigqibeleleyo, i-UL, i-SAA, i-EMC njl., Umzi mveliso omncinci uhlala usilela koku;
I-7, ii-capacitors ze-Electrolytic kunye nezinye izinto zenziwe ngophawu olukhulu, iimveliso eziphezulu kunye noRuby njl.
8, emva kokuthengisa okuqinisekisiweyo, intengiselwano yokwenyani yokwenene, 1: 1 ithathe indawo yento ephosakeleyo, kodwa uninzi lwefektri encinci ihlala ingenankathalo xa ijongene nengxaki yomgangatho, nokuba yingozi;
Inkqubo yokulawula ngokungqongqo, Ukubonelelwa kwamandla ukungena emnyango kuphantsi, kodwa yenza kakuhle akuninzi, ungenzi kakuhle, nangona ubuchwephesha obufanayo, izinto ezifanayo, zenza zonke izinto esingafaniyo kuzo, kuba inkqubo yolawulo ayifani, Izixhobo azifani;
10, iqela Strong r & d, r & d iqela inabantu abangaphezulu kwama-30;
I-11, ukuhanjiswa okuguqukayo nokukhawulezayo, ii-odolo ngobuninzi zihlala zihanjiswa zingaphelanga iiveki ezimbini, ii-odolo ezincinci zebhetshi zinokucwangciswa ukuhanjiswa kwisithuba seentsuku ezi-3 ukuba zineemveliso ezigqityiweyo kwisitokhwe;
12, Thelekisa ne-MeanWell, sinezibonelelo ze-ODM, i-OEM, umgangatho ongatshintshanga kwaye unamaxabiso okhuphiswano.
Egqithileyo I-40W yeVoltage eQhelekileyo yoPhuculo loMqhubi weLed
Okulandelayo: I-80Watt LED Umqhubi we-24volt IP67 Power Supply
12v 5a Umqhubi weLed
12v 60w Umqhubi weLed
I-60 watt ekhokele umqhubi
60w 12v kukhokele umqhubi
Amandla ombane aqhubekayo akhokele umqhubi 12v
Amandla ombane akhokelwa rhoqo ngama-24v
Umqhubi wesibane esikhokelwayo
Umqhubi okhokelwayo 60 watt
iadaptha yokukhanya yamandla okukhanya
Ukuhanjiswa kwamandla ombane
umtya okhokelwa ngamandla
Ukunikezelwa kwamandla kumbane okhanyayo
Umqhubi weLed Led Waterproof Ip67
Ukubonelelwa kwaMandla okuKhanya okungamanzi
12v 24v 150W LED Umqhubi weBhokisi yokuKhanya kweNtengiso
I-240V AC yangaphandle ye-250W Transformer yeWall Washer
I-40W yeVoltage eQhelekileyo yoPhuculo loMqhubi weLed
I-80Watt LED Umqhubi we-24volt IP67 Power Supply
275W Led IP67 Power Supply Kuba yangaphandle LED Stri ...